Online Marg | सडकमा मागेर खानेहरुलाई कहिले नागरिकता दिने सरकार ? संविधानले दिएको हकअधिकार पाउन पनि यत्रो संघर्ष ?
सडकमा मागेर खानेहरुलाई कहिले नागरिकता दिने सरकार ? संविधानले दिएको हकअधिकार पाउन पनि यत्रो संघर्ष ?
जुन राष्ट्रका आफ्ना बाबुआमा हुन्छन् तिनका छोराछोरी त्यहीका नागरिक हुने व्यवस्था छ । जहाँ जन्मियो तीको सरकारले नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिकता हरेक नागरिकको अभिन्न अंग हो । नागरिकता बिना कसैले पनि सरकारबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन् ।
चुनावमा भोट हाल्नदेखि लिएर एउटा सामान्य काम गर्नसमेत नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ । चुनावमा मतदान गर्ने दिन नजिकिदै जाँदा नागरिकता बनाउनेको भीड हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्दो देखिएको छ । जन्मेको मितिले १६ वर्ष पुगेपछि सरकारद्धारा नागरिकता पाइन्छ ।
नागरिकता नभएकाले एउटा सिमकार्ड समेत निकाल्न पाउदैन् । नागरिकताको महत्व यति छ कि यो भएन भने राज्यले देशका नागरिक चिन्दैन् । देशविदेश गएर रोजगार बन्नु त सपनामै सिमित हुन्छ भने उसले आफ्नै मुलुकमा समेत एउटा सामान्य निजि रोजगारी पाउदैन् ।
बाबुआमाको बिछोड हुँदा बालबच्चाले समेत नागरिकता नपाएका घटनाहरु थुप्रै छन् । बाबुआमाले बेलैमा जन्मदर्ता नगर्दिदा उनीहरुले पढ्न समेत पाउदैन् । जन्मदर्ता भएर पनि नागरिकता नभएका कारण आफ्ना पढाइ छोडेको पनि धेरै छन् ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय नै गलत देखिन्छ । एउटा जन्मदर्ताले कसैको भविष्य दाज्न पाउदैन् । नेपाली भएर जन्मिसकेपछि उसले पढ्न पाउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको यो व्यवस्थालाई कानुनबाटै हटाउनुपर्छ । बाबुआमाको गल्तीको भागिदार छोराछोरी बन्नुहुदैन् ।
यस्ता घटनाहरु मधेशमा निकै नै छन् । मधेसमा बस्नेहरुलाई नागरिकताको विषयमा थाहा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन् । उनीहरुको छोराछोरीले नागरिकता र नातिनातिनाले पढ्न । श्रीमान् मरिसकेका एकल महिलाले नागरिकता नभएकै कारण भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
मधेसका नागरिकहरुको नागरिकताको विषयलाई उठान गरेर मधेसी दलहरु पटकपटक सरकारमा पुग्यो । तर, उनीहरुको हाल अझै पनि त्यस्तै छन् । नेपालका शीर्ष नेताहरुको कुरैकुरोको पछि पर्दा हामी नेपालीले दुःख पाएका छौ ।
सत्तामा पुगिसकेका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र मधेसी दलहरु यिनीहरु भारतका दलाल हुन् । दिनभरि नेपालीको अगाडि राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा उठाउछन् । रात परेपछि मोदीको अगाडि शिर नुहुराएर लम्पसार पर्छन् ।
कतिपय राम्रो मुलुक जानको लागि नागरिकता बनाउन आएका छन् । तर, अधिकांश खाडीमा रोजगारीका लागि नागरिकता बनाउन आएका छन् । नेपालमा रोजगारीका क्षेत्रहरु खासै छैनन् । पढेकालेखेकाले आफ्नो स्तर अनुसारको जागिर पाउदैन् ।
त्यसैले पनि खाडीमा जाने नेपालीहरुको संख्या केही वर्षयता दुई गुणाले बढेको छ । सरकारी जागिरमा पनि आफ्नो मान्छे घुसाउने प्रवृत्तिले गर्दा दक्ष जनशक्ति खाडी छिर्न नागरिकता बनाउन आएको देखिन्छ । नागरिकता नभईकन सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि पाइदैन् ।
दुईदेखि तिन दिन लगाएर नागरिकता बनाउन आएका थुप्रै भेटिन्छन् । तर, नागरिकता पनि भनेको बेलामा पाइदैन् । छिटोछरितो काम गर्नुको सट्टा सिडियो कार्यालयका कर्मचारीहरु हल्लिएर बसेको भेटिन्छन् । यस्ता कर्मचारीहरुको कारण कतिपयको नागरिकता नपाउनै दिन आएको छ ।
गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा ज्ञान त छ तर अज्ञानताको नाटक देखाइरहेको छ । गृहमन्त्रीले हरेक जिल्लाका सिडियो कार्यालयको कर्मचारीलाई नागरिकता बनाउनको लागि घरघरमा खटाइदिनुपर्दैन् । सिडियोहरुपनि यस काममा आफै लागि पर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा शारीरिक रुपमा अपांग भएकाहरुले पनि नागरिकता पाउछन् । उनीहरुले पनि सरकारबाट पाउनपर्ने सेवासुविधा पाँउछन् । नेपाली नागरिक हु भन्ने महशुस उनीहरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकता बनाउनको लागि पहिले वडा कार्यालय धाऊ । बल्लतल्ल सिफारिस लिएर सिडियो कार्यालय गयो तिन दिन पर्खाइदिन्छ ।
तापनि नागरिकको दुःखलाई नियाल्न कुनै पनि अनुगमन गर्न निस्किएका छैन् । गृहमन्त्री आफै खटिदाँ मात्र जनताको हैरानी र आफ्ना कर्मचारीहरुको लापरबाही देख्न सक्छन् । कुर्सीमा बस्नको लागि मन्त्री बनेका हो ? अनुगमनमा निस्किन लाज लाग्छ ?
सरकारी कार्यालयमा अनुगमन नहुदा नागरिकले छिटोछरितो सेवासुविधा पाएनन् । हजार रुपैया पनि घुस खाने सरकारी प्रवृत्ति गरिब जनतामाथि आँच बनेको छ । पैसा पायो तुरुन्तै काम हुन्छ दिन सकेन् हप्तादिनसम्म पर्खिनुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीले छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने होइन् ?
राजनितिक दल भ्रष्ट्राचारी, सरकारी कर्मचारी दोब्बर भ्रष्ट्राचारी । यस्ताबाट केही होला, हामीले सुविधाको सास फेर्न पाउलाऊ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपाली जनताले फेरि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने दन आएकै हो ? यी दलाल र घुसखोरीहरुलाई हटाउनको लागि फेरिपनि सडकमा उत्रिनैपर्ने हो ?
हामी आफैपनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेर हिडेका छौ । यिनीहरुले जे गरेपनि, जतिसुकै दबाएपनि हामी कार्यकर्ता बनेकाहरु त्यसको विरोधमा बोल्न सक्दैनौ । तर, कार्यकर्ताहरुले हामी नेपाली हौ । नेपाली धती हाम्री आमा हो । नेपाली जनता हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर बिर्सेका छन् ।
पहिला नेपाली बनौ त्यसपछि पार्टीको कार्यकर्ता । पार्टीको आवाज होइन् नेपालीको आवाज बनौ । अनि मात्र देशको सभ्य नागरिक बन्न सकिएला । संविधानले दिएको नागरिकता पाउनको लागि लडाइ गर्नपरोस् । बाटामा मागेर खानेहरुलाई खोजी खोजी नागरिकता बनाउन पहल गर्न सिकौ । अशक्त, आवाजबिहिनहरुले पनि नागरिकता पाऊन् । राजनितिक दल, उधोग व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीले कतिवटा नागरिकता लिएका छन् त्यो पनि चेकजाँच गर्ने हो कि । आखिरी भारतका दलाल ित परे ।